Faritra Boeny: fotodrafitrasa maromaro notokanan’ny Praiministra | Région Boeny
Faritra Boeny: fotodrafitrasa maromaro notokanan’ny Praiministra
31 mai 2017 A La Une, Actualité
Lapan’ny tanàna vaovao tao amin’ny Kaomina ambanivohitr’I Belobaka, tsenam-bokatra sy biraom-pokontany ary biraon’ny delegen’ny Boriboritany tao amin’ny Kaomina ambanivohitr’I Boanamary . Ireo rehetra ireo dia samy ao amin’ny distrikan’i Mahajanga II.
Ireo no notokanan’ny Praiministra sy ireo ministra nanara-dia azy, niaraka tamin’ireo manam-pahefana teto Boeny, ny zoma 26 mey 2017.
Ny fitokanana ny Lapan’ny tanàna vaovaon’ny Kaomina ambanivohitr’I Belobaka no nanombohan’ireo delegasiona ny dia. Nisy ny fahanginana iray minitra ho fahatsiarovana ny Ben’ny tanàna teo aloha, dia Itompokovavy Ravoniarisoa Martine izay fototra nahazoana io foto-drafitrasa vaovao io. Ankehitriny dia io no Lapan’ny tanàna tsara indrindra aty amin’ny faritra Boeny, ankoatra ny an’I Mahajanga renivohitra izay nolovaina tamin’ny frantsay.
Avy eo dia nanohy nakany Boanamary ireo delegasiona, nitokana ny tsenam-bokatra sy ny biraom-pokontany ary biraon’ny delegen’ny Boriboritany izay ezaka madiodion’ny Kaomina Boanamary.
18km miala ny tampon-tanàn’I Mahajanga, manaraka ny RN4 no mivily makany amin’ny Kaominina Boanamary. Ratsy dia ratsy ny làlana manomboka eo. Sahirana dia sahirana ny Praiministra sy ireo mpanara-dia azy nandeha tamin’izany làlan-dratsy izany ka nanapa-kevitra avy hatrany ny Lehiben’ny Governemanta fa ho asiam-panamboarana ary tsy maintsy vitaina mialohan’ny 26 jiona 2017 ny ampahany mirefy 5km. Ny sisa tavela kosa dia ampidiriana amin’ny teti-bolam-panjakana 2018 ny fanamboarana azy rehetra.
Marihina fa tamin’ny taonjato faha XIX tany ho any dia ny Anglisy no nanorina ny tanànan’I Boanamary. Ary mbola hita taratra ao mandrak’ankehitriny ny drafitry ny tanàna sy ireo foto-drafitr’asa lehibe navelan’izy ireo. Ny seranan-tsambo ohatra dia fotodrafit’asa iray goavana izay manamarina izany, saingy efa tsy mihodina intsony izany ankehitriny.
Ankoatra izay ireo mambran’ny goverenemanta nanara-dia ny Praiministra, dia nanolotra lela-vola mitotaly 3 000 000 Ariary ho an’ireo Reny rehetra ao amin’ny Kaominina Belobaka sy Boanamary mba hifalin’ireto farany tamin’ny fetin’ny Reny lasa teo.
Nisy ihany koa fanomezana tsodrano sy solo-tsakafo ho an’ireo mpino silamo manatanteraka ny ramadany 2017.